Rio de Janeiro - I LOVE RIO- FASHION
I LOVE RIO kuveza fashion yesiteleka kakhulu futhi wesimanje for amadoda nabesifazane Rio de Janeiro, ukuhlinzeka siqonde izitayela zakamuva izingubo for the emsebenzini, amaqembu, ezemidlalo, ukuzilibazisa kwansuku kanye beach.
Ukuthuthukiswa komlando omhlaba kanye kazwelonke style izitayela unikezwa bheka ngaphakathi lokwakha abafundi ngomuzwa ukubaluleka zezenhlalo nezombusazwe ifomu art. Ibhayisikobho imijiva kanye nezingubo ukuba bikinis nokubhukuda iziqu, a catwalk of style imibono ingalendlela futhi zilethwe abafundi ukubasiza bavuselele umdlandla ikhabethe zabo futhi baqonde yobuhle Carioca.
SITAYELA ngoba ingqondo AMATHEKSTI
Ukuphila esishukumisayo Rio de Janeiro, kuhlobene eduze okukhulu fashion isitayela yayo, njengoba ingenye izilimi ukuthi umuzi isebenzisa ukuveza ubuntu bayo. Abantu Rio sesifake ezinye imfudumalo ubuhle imvelo yabo futhi uhlamvu endleleni bazenza, okwenza yobuhle babo kakhulu abanethonya emhlabeni fashion international.
Zonke umhlabeleli nabaqambi nezindlu fashion kakhulu ovelele zitholakala kule ndawo kwamasiko, kodwa brand bomdabu umqhele - panorama wendawo ngenjabulo Kwakugcwele abaklami angenakuvinjwa anika izitayela izwi labo siqu.
Cariocas abe look abahlukene kakhulu, elinesimo Ukuthanda umbala, ukucwazimula futhi buhle. Fashion emzini namuhla kuwumphumela lokusungula endawo kanye amathonya ezivela kuwo wonke umhlaba, reimagined futhi bazivumelanisa imfudumalo nokuvuleka bemvelo baleli dolobha nezakhamuzi ezathinteka ngayo.
Amaphethini acacile, ezisekelweni futhi izakhi oluluhlaza ukusebenza ngokuphelele ezandleni lokhu plaza for ezishisayo umbala-a-udibi: Rio abeka kuyo izindinganiso zalo siqu, futhi ufanisa kuphela uqobo. A ukusetshenziswa eyingqayizivele kakhulu tones, yokwenza eluhlaza futhi ucwebezela, kanye namabumbeko angasiwo weJiyomethri noma flaunty ukunikeza onekhono okusobala ukuba zezindiza, ngo fashion kukhombisa kanye ogwini.
Kuze kwekhulu lama-20 fashion Brazilian yacishe ngokuphelele enqunywe izitayela European, okwakusho ukuthi izingubo kuyaqabukela bazivumelanisa nesimo sezulu ezishisayo. Kulezi lisaqala izitayela international ababeholwa abaklami French, ngubani akhululwa abesifazane kusukela corset.
The bikini yayiklanyelwe eParis ngo-1946, okubangela isiyaluyalu yokuthi Lethiwa Bikini Atoll, lelincane Atlantic Ocean lapho baseMelika eyenziwa ukuhlolwa athomu. Waqale igqoke iminyaka emibili kamuva Rio de Janeiro, futhi kusukela isibe uphawu yisakhiwo sodumo Carioca beach isiko. Ngo-1962, flip flops kakhulu bokuqala babedalwe eBrazil, okusekelwe nezicathulo Japanese, lapho kwavula indlela yokuba umhlaba bodumo Havaiana brand.
Mod, Hippie futhi Grunge nezimfashini wabusa 60s, 70s and 80s phesheya West, kabanzi kuthonywa umculo othandwayo of the time ezifana rock, disco, Grunge futhi metal.
Ukuba ezihlukahlukene heritages, amasiko, kanye nemikhutshana kuleso Rio de Janeiro ekhaya, fashion futhi izitayela athuthukile ngendlela efanele. Carioca style kugujwa for imibala yayo egqamile futhi iphile lapho zivumelane sezulu libalele, kodwa kukhona umehluko ophawulekayo phakathi izinhlobo izingubo esizigqoka zibonwe yiwo umsebenzi nokungcebeleka.
UMkhandludolobha amasiko kakhulu futhi ezihlukahlukene, futhi ine imisinga eziningana wobuciko kanye original egijima emigwaqweni yayo lively. Samba, Surf futhi Bossa Nova kukhona ezinye izinhlobo ukuthi anikeze fashion uhlamvu esiyingqayizivele lapha, futhi kungatholakala zonke izinkulumo wobuciko ukuthi abaklami wendawo ukhethe.
Nakuba ukwehluka omkhulu imibala, bobunjwa, tinkhulumo kanye imiklamo kungabonakala okungahleliwe ukuba isivakashi, kukhona iziqondiso ezicacile neziqondile izindawo, izikhathi, nemikhutshana kuleso. Beach isembatho lulandela imithetho ecacile, ngokuvamile okuningi njengoba ambiances okusemthethweni nenhle: nezivakashi uphawule ngokushesha asikho isizathu ukubheka zingcolile ebhishi.
Art, ubuhle kubaluleke e yokuphila Rio sika. The beach and sceneries yayo, imisebenzi kanye emizweni kukhona ukukhangana main ekuphileni kulo muzi kanye spot ephelele lezi nakho bahlanganyele kuyinto fashion. Abaklami Kokugqoka kokubhukuda kukhona a hit enkulu unyaka wonke, ngoba imikhiqizo yabo akuzona bakhangane turky, kodwa indlela yokuphila zonke izakhamuzi.
Ngesikhathi amadoda ngesonto nabesifazane bavame baya amasudi, izingubo okusemthethweni kanye nezicathulo avaliwe. Kukhona ubuciko ethile ukukhetha lezi zinto banikezwe sezulu kuhlale kushisa futhi kunomswakama - abesilisa nabesifazane bavame ukuba bagqoke izinto okuxekethile olufanelekayo wenza izindwangu ukukhanya.
A isici elikhethiwe kwansuku nobusuku esigcwele nezimfashini ukuthi kokubili abesilisa nabesifazane banomthwalo impela look yemvelo. Izikhindi Denim, okuxekethile wayibhinca eziqongweni, elivame iziketi futhi izingubo, ukhombise impilo t-shirts nezicathulo kuyabonakala ezindaweni zokuphuza utshwala, tikwele, amapaki namabhishi. Yenza-up ngokuvamile ngempela neqondayo, futhi izinwele zabantu ngokuvamile short futhi ezimangelengele, ngokuvamile obuhambisana nokuthanda izinto ukushefa inani noma intshebe ukukhanya kakhulu.
Nakuba look zakudala kungokwemvelo futhi free-eligabavulayo, ikakhulukazi emhlabeni emabhishi, Cariocas bavame ukuba lihlale kahle-kempt. Shoes and izingubo fresh, ahlanzekile futhi un-ngayinyomfoza ngayiphosa. Abesifazane abaningi ashiye izihluthu zabo ukuba bawe ngokwemvelo, njalo abanye abaye kubo waqonda. Libuye umkhuba abantu abaningi sebekholelwa kokubili amadoda nabesifazane ukuba babe ukuzimonyonga ukulungisa izinzipho zezandla nezezinyawo.
Yezicathulo Multi-zamasiko izitayela, iziketi kanye nobucwebe, kukhona isakhi njalo wezigqoko Carioca. Kukhona popular designer brand zendawo ukuze abantu abasha kuleli dolobha futhi ebanzi Brazil - voices ukuphayona ngo fashion Brazilian, sonkana ukuze abantu bazo zonke izitayela bezinkolo ngokusebenzisa izicucu onohlonze fresh and yiziphazamiso ezihehayo. Designs Rio sika ukuhlanganisa ephezulu okwakhe futhi yinkimbinkimbi, kanye ukuqaphela izidingo zansuku zonke amadoda Brazilian nabesifazane.
A imfanelo kulo muzi fashion kuyinto ngekwehlukana kwaso, futhi kukhona okuthile wonke umuntu kusukela classiest futhi ohlonishwa kakhulu surfer njalo, Rio de Janeiro uthola indlela ukuhlangabezana nezidingo futhi sijabulise isimo, futhi ngisho ukuxhuma nezifiso yokuzamazama. Lokhu yizinhlobonhlobo kungatholakala ngaphansi brand ehlukahlukene, ashaya kanye nakho exotic ukuhlakanipha kanye lokusungula.
Imboni fashion in Rio ebelilokhu in ububanzi ezinedumela eminyakeni edlule, futhi umuzi manje uthwala ezihlukahlukene kwesidoda fashion SMME lapho fashionistas futhi stylists kusukela emhlabeni wonke ukuhlela unyaka emhlabeni. Umuzi ubuye ekhaya isikhungo ezibalulekile ngokuthi "Academia Brasileira da Moda," Brazilian Academy of Fashion.
The ocebile scene amasiko liphetheni endaweni konke ukusibonisa wobuciko kanye fashion kwenza ukubukeka eziningi ekhalendeni Carioca, ikakhulukazi Rio de Janeiro sika Fashion Weeks, lapho waminyaka yonke ukuhola ngendlela ehlobo nasebusika izinhlelo. Lezi zikhathi, uphakathi web elikhulu eqinile izenzakalo ezihlanganisa ngonyaka futhi izwe imibukiso okuthakazelisayo. Amagama kunabo embonini, kanye amathonya key ezivela phesheya, kubuthene lokhu Fest mangaza kanye ubuhle ebusuku yabo imijiva, kwehlobo nesignesha zabo Posh and wabeka-back, kanti ukugeza amasudi eyinkimbinkimbi. In umhlaba imibala kanye pastels, agcwala Imibala egqamile kanye yezicathulo intwasahlobo, ubufazi futhi yenza izinkanyezi of the show weqiniso.
Style izakhekele, sibonga poise futhi ubuhle bemvelo besifazane Brazilian: real Muses ukuphila emphefumulweni omuzi. Brazilian onobuhle super futhi fashion mkhuba ebhekene nalabo abamisa kuyizibonelo ukubaluleka fashion nesithakazelo yaseBrazil kanye nogqozi lobuqambi bezinto abesifazane kanye nobuhle. Flaunty izinwele ingenye zokuthengisa kulo muzi Brazilian: ngabe kuba eside surfer izingidi, noma mermaid sinententezo mane, izinwele enempilo futhi acwebezelayo is devotedly kwafunwa.
Abanye imibono, ngoba labo hhayi njengoba elijwayele umswakama futhi umoya ejwayelekile ebhishi side, kungaba usizo kakhulu ukuhambisana namazinga eduze ophelele bendawo. I "blowout Brazilian" eqondisa izinwele amasu has adepts eziningi, kanti ngaphezulu izitayela yemvelo beba nje zithandwa kwezifiso for ubuhle zokwelapha enempilo, esikhundleni ongakhetha chemical.
Ukuthenga eRio de Janeiro kungaba ezihlukene njengesi 160 omakhelwane omuzi, emabhishi 70, futhi nemigoqo okungenamkhawulo. Luxury nezitolo okukhethekile ezitolo ezinkulu zitholakala kakhulu okujabulisayo izimakethe emgwaqweni lapho konke ishibhile - ingasaphathwa SMME Antique, edumile Ipanema Hippy Fair, noma Copacabana ebukekayo ebusuku zezitsha.
A ezihlukahlukene ongakhetha ukuze bamukele wonke umuntu futhi amabhajethi nihlakazeka phakathi zonke izifunda, futhi anikeze wonke umuntu ehlukile ephelele usuku lina. Mini zezitolo, cishe bezifihle njenge- izitolo single, fihla ngaphakathi kwesakhiwo kuzo zonke izingxenye edolobheni - kude ukukhanya endaweni, lezi zikhungo kukhona intandokazi phakathi ukuhlabana abazingeli wendawo.
Ngakho, uma emabhishi, bikinis, futhi ukushisa Rio abe kakhulu, bese umuzi ezinye shopping amathuba brilliant for umthamo yokuzelapha. Zikhona ezitolo ezinkulu eziningi, bethenga izakhiwo, boutiques, futhi eyodwa encane off izitolo ukugcina zabathengi abamagange happy.
Amanani ziyahlukahluka like sezulu ehlobo - ukuze indawo kungasho umehluko phakathi ezibizayo futhi ukuhlabana - ikakhulukazi izingubo, izicathulo, yobuciko neyezandla, futhi eziyisikhumbuzo.
Barra Shopping kuyinto yezitolo Rio ngobukhulu futhi ethandwa kakhulu - elise esifundeni Barra da Tijuca, kuba cishe edolobheni elincane ngokwayo, ephelele ne zokudla kanye yeshashalazi movie in eduze New York City isikhungo - ekhaya zokudlela, ezinkantini, futhi ngisho imfanelo amaqembu. It ngokungangabazeki indawo ukuya umbhejazane yezitolo, namakhulu izitolo sisabalale elula eside-4km, from amagama ephezulu emgwaqweni ngokuzimela ephethwe fashion nobucwebe izitolo. Budebuduze endaweni efanayo, osanda kufika endaweni yesehlakalo shopping iyona Posh nemfashini Village Mall, ukubonisa kuphela arcade of the arcade of brand Brazilian kanye international.
Futhi ezibhekiswe umthengi eyinkimbinkimbi, iyona São Conrado Fashion Mall - ekhaya upscale ezitolo ngamunye ukubonisa okukhethekile umklami brand. Muhle, ezemidlalo, futhi izitolo electronic nikeza izivakashi moneyed futhi Cariocas nazo zonke izidingo ntambama fun. The isikhala ivuliwe futhi enomoya, futhi Ambience sikhululeke kakhudlwana kunezinye bethenga izakhiwo. Lapha, akuyona into engavamile ukuzibona osaziwayo Brazilian futhi abakhangisi bemfashini ukutadisha ezitolo, ngezinye izikhathi endleleni yabo ebhayisikobho wendawo ifakwe izikrini ezine futhi evumelana valet yokupaka.
Ukuze ukuyothenga omkhulu, futhi eduze ethandwa kakhulu beach izindawo, umxhwele, Rio Africa mall is sizikhandle elisendaweni Botafogo, kanti Chic Shopping Leblon okulungile ngaso inhliziyo Leblon Distrcit. With amakhulu ezitolo, ezihlukahlukene zokudla, kanye yeshashalazi movie, lezi ezinkulu zitholakala eduze eziningi sezakhiwo Rio athandwa kakhulu, ezifana Sugar Loaf futhi Corcovado izintaba.
Leblon kuyinto endaweni Posh lapho ukuthola zokudla, umklami boutiques futhi umbono sultry edolobheni. Kuyinto futhi eduze Babilonia Feira Hype, umcimbi yanyangazonke ukuveza fashion, design, abaculi Culinary nomculo i komhlaba, touch okunenjongo unrepeatable. Umbukiso Guest futhi imibukiso bukhoma kusuka oluzayo noma emhlabeni abaculi eyaziwa futhi DJ kunezela ekuthandweni isipiliyoni, okuyinto omunye kakhulu okwabelwana futhi Kulindeleke by the bendawo imagange ukuthambekela ezintsha fashion.
Fashion Brazilian namanje ephawulwe by an syncretism yobuhle - inhlanganisela amathonya, zokukhulekela, imiqondo kanye izitayela. Lokhu Fusion unique njalo ingenza Carioca abaklami, futhi kungatholakala emicimbini kanye ezitolo high-ekupheleni, nemfashini zezitolo, kanye SMME fashion ebukekayo kulo lonke idolobha.
Ngaphezu nemfashini shopping izifunda kanye ezitolo ezinkulu ukuthi pepper komuzi, kukhona eziningi fashion nezingubo SMME. Omunye lodumo kakhulu lezi umcimbi bimonthly ngokuthi "O Cluster," okuletha ndawonye ocacile ocwaningayo fashion, umculo kanye gastronomy in a somuzi enhle endaweni Botafogo.
Kukhona igumbi for ezinye SMME fashion, njengalowo awenza ngaphambi nje aphethwe njalo ngeSonto ezingomakhelwane yisakhiwo sodumo Ipanema: the Feira Hippie Market, lapho unikeza izivakashi futhi abantu bendawo amathuba omuhle ukubona futhi ujabulele amagugu Antique futhi uvumelane ngokuphelele yesehlakalo Retro Chic of Vibe ukhululekile ukuthi kuphela Rio de Janeiro anganika, futhi okuqinisekisiwe ukukhiqiza abanye izinto ezithakazelisayo ukuze umuntu nesithakazelo Carioca ubuciko kanye nemisebenzi yezandla.
Noma ubani looking for izingubo nezicathulo ngamanani ehlisiwe, kufanele amabombo yedolobha Centro, ikakhulukazi emigwaqweni Rua Uruguaiana, Rua da Alfândega, futhi Rua Buenos Aires, lapho ezithengisa fashion linqobe izimpi emgwaqweni wesifunda oluyingqophamlando shopping ngokuthi "SAARA."
Uma ethenga art original, The ezingomakhelwane Santa Teresa iyona ndawo hangout kwabaningi abaculi Rio kanye izingqondo creative, abaningi kangaka zobuciko zihlobise emigwaqweni cobbled futhi alleyways ayibanzi. The amathilomu, imigoqo, futhi zokudlela kulendawo ebukekayo kudambise izinyawo ukhathele ngemuva yezitolo usuku lonke, kanti ezinye izibonelo ezinhle imidwebo Brazilian angathengwa endaweni - kusukela ezingabizi ezibizayo more, futhi ngokungaguquki unique.
Ukuze izinto ezikhethekile more, like zomculo, Rua da Carioca kuyinto emgwaqweni plethora izitolo zomculo lapho bomdabu intruments Brazilian ezifana Guitars Bahian, Rabecas, futhi Pandieros zingathengwa - bonke ukwenza izinto eziyizikhumbuzo ezinkulu futhi presents umndeni emuva ekhaya.
With a ukuqonda okunjalo uketshezi yezitayela, izithakazelo kanye Ukuhlolwa emizweni kanye nakho, akumangalisi ukuthi Carioca imiphumela lekudala a sipho ebanzi kakhulu izinto futhi amasu, lapho consequently kuveza Indalo akunakwenzeka futhi enkulu lokubhalela, ubucwebe, ubuhle awukudla kanye izesekeli.
I LOVE RIO inikeza amathiphu kanye neseluleko the arcade abaklami, izitolo nezimakethe ukuba ivumelane ezixube okuthandwa nezitayela.
Imboni fashion in Rio ebelilokhu in ububanzi ezinedumela eminyakeni edlule, futhi umuzi manje uthwala ezihlukahlukene kwesidoda fashion SMME lapho fashionistas futhi stylists kusukela emhlabeni wonke ukuhlela unyaka emhlabeni. Lezi zindawo edalula, eceleni izitolo esihle kakhulu ukuthenga izicathulo, izingubo, ubucwebe kanye nemikhiqizo ubuhle. In addtion ukuba nemfashini shopping izifunda kanye ezitolo ezinkulu ukuthi pepper umuzi, I LOVE Rio peruses fashion kanye nezingubo SMME ehlukene yokuhlanganisa intuthuko kanye zokucwaninga ngesitayela, umculo kanye gastronomy.